Mambokadzi anobvisa zvakanyadzisa Muchinda Andrew mazita ese echiuto pakati pekunyomba pabonde
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Mambokadzi anobvisa zvakanyadzisa Muchinda Andrew mazita ese echiuto pakati pekunyomba pabonde
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • mhosva • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau
Mukumhan'arira humambo hweBritain, Virginia Giuffre anoti akatengeswa kuna Muchinda Andrew kuti aite zvepabonde neanonoka pedophile bhirioni Epstein nemumwe wake achangobva kubatwa nemhosva Ghislaine Maxwell.
The UKBuckingham Palace yakapa chirevo chipfupi nhasi ichizivisa kuti "hukama hwaPrince Andrew muchiuto uye vatsigiri vehumambo" vakadzoserwa mambokadzi.
Chiziviso ichi chinouya zuva rakatevera mushure mekunge magweta aPrince Andrew atadza kunyengetedza a US mutongi kuti arambe mhosva yekushungurudzwa kwepabonde pamusoro pehumambo pahunyanzvi. Mhosva iyi ine chekuita nemhosva dzakasimudzwa naVirginia Giuffre, uyo anoti muchinda uyu akamboita naye bonde muna 2001 achiri mudiki.
"NeThe mambokadziMvumo uye chibvumirano, Duke weYork mubatanidzwa wemauto uye vatsigiri vehumambo vakadzoserwa kuna The Queen. Duke weYork acharamba asingaite mabasa eruzhinji uye ari kudzivirira nyaya iyi semugari akazvimiririra, "Chirevo chePalace chakaverenga.
Muchinda Andrew akaramba kushungurudza pabonde Giuffre, achitaura mubvunzurudzo ya2019 kuti haana kumborangarira kana akambosangana naye. Mufananidzo unowanikwa pachena wehumambo, zvisinei, unoratidza muchinda neruoko rwake pachiuno chaGiuffre, sezvakafananidzirwa vaviri vacho muLondon.
Kutanga neChina, vanopfuura zana nemakumi mashanu varwi vehondo vekuBritain vakakumbira mambokadzi kumukumbira kuti abvise mwanakomana wake mabasa ake echiuto uye akayangarara zano rekuti asunungurwewo zvisina chiremera.
"Isu takatsamwa uye takatsamwa kuti Muchinda Andrew anoramba ari nhengo yemauto uye anoenderera mberi akabata mazita echiuto, zvinzvimbo uye zvinzvimbo, kusanganisira zveVice Admiral weRoyal Navy," varwi vakadaro mutsamba yakavhurika.